Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Dhisida Garaadka siyaasadeed ee qofka.
Maqaal: Dhisida Garaadka siyaasadeed ee qofka.
Posted by ONA Admin	/ June 9, 2017
Dhisida garaadka siyaasadeed waxaa loola jeedaa in qofkasta wuxuun kala socdo meesha giraan-girta siyaasada aduunka ku wareegayso, si uu ula jaan qaado isbadalada guud ahaan ka dhacaya Geeska Africa iyo caalamka.
Waxaa kaloo soo galaya la socodka uu la socdo xaalka uu ku sugan yahay dalka Gumaysiga Itoobiya iyo dhibaatooyinka uu ku hayo shacabka uu gumaysto, Isla markaana wuxuu si fudud u lafa guri karaa dhibaatooyinkaas deedna wuxuu baadi goobi karaa sidii loo heli lahaa xal waara oo wax ku ool u noqon kara bulshadeena dulman ee Soomaalida Ogadeniya Iyo guud ahaan Geeska Africa.
Qofka uu garaadkiisa siyaasadeed dhisanyahay wuxuu codkiisa ku biirin karaa inta jecel inay waddankoodu wax iska baddalaan oo uu u hayaamo nolol wanaagsan iyo xornimo taam ah. Kobcintaas waxaa asaas iyo bud dhig u ah aragti dhamays tiran, garasho qoto dheer, dareen mas’uuliyadeed iyo rabitaan dhaba ah oo guul xoriyadeed salka ku haysa.
Dhacdooyinka qalafsan ee tiiraanyada leh ee uu dalkeenu ku jiro waxaa la is odhan karaa waxaa ugu wacan aradka garaadka Iyo garasho la’aanta kuwa Soomaalida ah ee cadawga la garab taagan hiil iyo hoo.
Maxaa ka dhalan kara garaad la’aanta siyaasadeed ?
Maqnaanshaha wacyiga siyaasadeed iyo ka aradnaanta garaadka siyaasadeed waxaa laga dhaxlaa:
1. In la fahmi waayo luuqada siyaasadeed ee ay maleegayaan cadawga iyo kuwa u adeega ee damiirku ka dhintay.
2. Ogaan la’aan adigoo u adeega cadawgaaga si fududna ugu fuliya ujeedooyinka guracan ee uu kaa damacsan yahay.
3. Qalin daar siyaasadeed ama figradeed oo kugu yimaada.
4. Adiga oo aan ka faa’iidaysan fursadaha jira.
5. Adiga oo uu cadawgaagu iska kaa mashquuliyo meeshaad ku mashquuli lahayd sidaad isaga uga xoroobi lahayd.
6. Kalsoonida shacbiga dhexdiisa oo lunta ka dib markii iyaga qabiil qabiil ama gobol gobol la isaga horkeeno.
Hadaba sidee loo kobcin karaa garaadka siyaasadeed ee qofka ?
Way badan yihiin Tabaha la beegsan karo si loo kobciyo garaadka siyaasadeed waxaana ka mid ah:
1. Alle ka cabsi, barashada diinta iyo fahamka sunanka kawniga ah ee Rabbi, isla markaana maanka lagu hayo sababaha dhaliya in ummado dhan rogmadaan kuwa kalana horumaraan.
2. Barashada taariikhda Islaamka, mida halganka iyo marxaladda siyaasadeed ee uu aduunku marayo gaar ahaan mida cadawgaaga.
3. In mar walba lala jaan-qaado marxalladda lagu jiro isla markaasna loo duurgalo lalana socdo ujeedooyinka iyo mashaariicda qarsoon ee cadawga iyo saaxiibada, labaduba midba meeshiisa ka maleegayaan.
4. In lala socdo dhacdooyinka siyaasadeed ee socda si daganna loo lafa-guro.
5. In la qabto shirar iyo isku imaasho abaabul oo bulshada lagu wacyi galin hayo.
6. In la helo barbaarin siyaasadeed loona dajiyo manhaj kor loogu qaadayo garaadka siyaasadeed ee xubnaha ururka.
By Kulmiye Abdi